अमेरिकाबाट १ खर्ब ५ अर्ब लगानी नेपाल भित्रने ! - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
अमेरिकाबाट १ खर्ब ५ अर्ब लगानी नेपाल भित्रने !
Published On : ३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ०९:०६
एक अमेरिकी लगानी कम्पनीले नेपालमा एक खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । अमेरिकाको सीआईएम ग्रुपअन्तर्गतको स्काई पावर ग्लोबल कम्पनीले सौर्य ऊर्जामा सो लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार स्काई पावरले ३ देखि ४ वर्षभित्र १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेर ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पुनले भने, ‘उनीहरुको लगानील प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै फास्ट ट्र्याकमार्फत लगानी स्वीकृत गर्ने प्रतिवद्धता हामीले गरेका छौं ।’
स्काई पावर ग्लोबलले एक वर्षमा २ सय मेगावाटको दरले ३ वर्षमा ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । ग्रिन जायन्ट पावर नेपालका माध्यमबाट हुने लगानीबाट नेपालमा सौर्य ऊर्जाको विद्युत परियोजना सन्चालन मात्रै होइन, सोलार प्यानल नै उत्पादन गर्ने कारखानासमेत स्थापना हुनेछ ।